4K भिडियो डाउनलोडरको साथ युट्यूबबाट 4K भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् म म्याकबाट हुँ
म्याकको लागि 4K भिडियो डाउनलोडरको साथ YouTube बाट 4K भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले आफैंलाई खोज्नु पर्ने अवस्थामा फेला पार्दछ भिडियोहरू विशाल यूट्यूब भित्र र पछि तिनीहरूलाई तपाइँको कम्प्युटरमा डाउनलोड गर्नुहोस् तिनीहरूलाई कुनै पनि ठाउँमा इन्टरनेट जडानको आवश्यकता बिना नै मजा लिन सक्षम हुन। अब जब 4K टेलिभिजन र मनिटरहरू, साथ साथै नयाँ iMac रेटिना 5K डिस्प्लेको साथ, हरेक पटक फैलिन थालेको छ अधिक YouTube बाट उच्च रिजोलुसन भिडियोहरू डाउनलोड गर्न खोज्दै छन्।
यूट्यूबबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने अनगिन्ती तरिकाहरू छन्, तर हामीले आज तपाईंलाई प्रस्तुत गरेको शर्त ध्यान दिएर जानेछैन र त्यो यही हो 4K भिडियो डाउनलोडर तपाईं भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ तिनीहरूको गुणवत्ता चयन गरेर, 4K गुणवत्ता चयन गर्न सक्षम हुन।
4K भिडियो डाउनलोडर एक धेरै साधारण अनुप्रयोग हो जुन तपाईं आफ्नो म्याकमा विभिन्न गुणहरूमा YouTube बाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। थप रूपमा, यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं सम्पूर्ण प्लेसूचीहरू र च्यानलहरू डाउनलोड गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र ढाँचामा प्रतिलिपि बचत गर्न सक्नुहुन्छ MKV, MP4, M4A, MP3, 3G वा FLV।
उच्च रिजोलुसन भिडियोहरूको रूपमा, यो भिडियो डाउनलोड गर्न सक्षम छ HD 1080p, HD 720p वा प्रसिद्ध 4K गुणवत्तामा, ताकि जब तपाईं तिनीहरूलाई तपाईंको मोनिटर वा उच्च-रिजोलुसन टिभीमा हेर्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई रमाउनेछ। यदि हामी यो सानो अनुप्रयोगको प्राथमिकतामा अलि अन्धा गर्दछौं, तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि यसले तपाईंलाई उपशीर्षकहरू डाउनलोड गर्न विकल्प पनि दिन्छ, तपाईं बीचमा छनौट गर्न दिनुहुन्छ। यदि तपाईं तिनीहरूलाई एक एसआरटी फाइलमा चाहनुहुन्छ वा भिडियोमा इम्बेड गर्नुहोस्।
अर्कोतर्फ, हामी तपाईं बाट भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उल्लेख गर्न सक्छौं फेसबुक, फ्लिकर, Vimeo, साउन्डक्लाउड वा डेली मोशन। यो गर्न तपाईंले ठेगाना मात्र प्रतिलिपि गर्नुपर्दछ, यसलाई अनुप्रयोगमा टाँस्नुहोस् र बाँकीको ख्याल राख्नुहुन्छ।
संक्षेपमा, एउटा अनुप्रयोग, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र जुन तपाईं तलको लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र अब रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। अवसर नभुल्नुहोस् र YouTube भिडियोहरूको आनन्द लिनुहोस् जहाँसुकै र जब तपाईं कुनै समस्या बिना चाहनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » म्याक प्रोग्रामहरू » म्याकको लागि अन्य अनुप्रयोगहरू » म्याकको लागि 4K भिडियो डाउनलोडरको साथ YouTube बाट 4K भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
ओले सज्जनहरू, बधाई! समुद्री डाकुलाई प्रचार गर्ने एक पोष्ट, तपाईंले आफ्नो साथीहरूलाई आउट गर्नुभयो। आशा छ कि तपाइँको लेख र फोटोहरु तपाइँको वेबसाइट बाट चोरी हुनेछ, हामी हेर्ने छौं कि तपाइँ कसरी एक फोटो लेख्न को लागी लेख्न र सोया डी म्याक बाट नि: शुल्क प्रविष्टिहरु को नक्कल गर्न सक्नुहुन्छ। Scoundrel पांडा
समुद्री डाकूलाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई थाहा छैन तपाईं कहाँ पाउनुहुन्छ YouTube भिडियो डाउनलोड गर्नु अपराध हो। सबै प्लेटफर्महरूमा यसका लागि अनुप्रयोगहरू छन् र भ्रमण अफलाईन गर्न यस प्रकारको डाउनलोड अवैध छैन।
म तपाइँको टिप्पणी मेटाउन गइरहेको छैन ताकि तपाइँ यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ र तपाइँको कुराको बारेमा थोरै सोच्न सक्नुहुन्छ। सोया डी म्याकमा हामी चोरीलाई बढावा दिदैनौं, अवैध सामग्रीको डाउनलोडको कम यूट्यूब र यो अनुप्रयोग कुनै पनि अवैध वा धोखाधडी सामग्री होईन। टिप्पणी गर्नु अघि आफूलाई राम्रोसँग सूचित गर्नुहोस्।
डाउनलोड गर्दै र धन्यवाद जोर्डी। ओह र केहि पनि नहटाउनुहोस्।
उत्तम, धन्यवाद !!!
यसले निरन्तर मलाई एरर दिन्छ, डाउनलोड गर्न सकिँदैन - केहि मलाई थाहा छ मलाई के हुँदैछ? सबैलाई अ h्गालो
माफ गर्नुहोस्, उसले मलाई भिडियोहरू डाउनलोड गर्न दिँदैन, उसले मलाई त्रुटि भन्छ, म डाउनलोड गर्न सक्दिन
हेर भ्वाल्फ भन्यो
राम्रो, राम्रो पोष्ट। कुनै पनि तरिका प्रोग्राम पूरा गर्नको लागि क्रमश: प्राप्त गर्न को लागी, यसको भुक्तानी नगरी? मैले यसलाई जताततै खोजेको छु, विन्डोजको लागि यो देखा पर्दछ र पूर्ण काम गर्दछ, तर म्याकका लागि यो असम्भव छ, कि त सिरियल वा प्याच हो।
यसले समुद्री चोरीलाई प्रोत्साहित गर्दैन, तर यो यस्तो हुन्छ कि तेस्रो विश्वका देशहरूमा सबै परमिटहरू भुक्तान हुन सक्दैन किनकि हामी डलरमा कमाउँदैनौं र सबै कुराले हामीलाई डलरमा खर्च गर्दछ।
धन्यवाद र आदरणीय।
Herr Wolf लाई जवाफ दिनुहोस्
पहिले टेस्ला, अब फियाट। सम्भव एप्पल कारको बारेमा कुरा गरिरहन्छ
BioShock २ बिक्रीको लागि म्याक अनुप्रयोग स्टोरमा सीमित समयको लागि